globe - Synonyms of globe | Antonyms of globe | Definition of globe | Example of globe | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for globe
Top 30 analogous words or synonyms for globe
ဘားမား ဗီဂျေ Bodil (Danish Golden Globe) 2009 (Denmark)
ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ ပြင်သစ်တွင် ၁၈၃၂ တွင် La Globe မဂ္ဂဇင်းမှာ စသုံးသည်။
ရှဲလ်ဒန် အက်ဒဲလ်ဆန် Boston Globe ကလည်း သူ့အား “Las Vegas မှာ ပြည်ထောင်စုဆန့်ကျင်ရေး စစ်ပွဲဆိုးကြီးတွေ ခင်းနေတာ”ဟု မှတ်ချက်ချခဲ့သည်။ လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်သူ Berkley က New Yorker ဆောင်းပါးတွင် အဒယ်လ်ဆန် သည် “ငွေကြေးအင်အားသုံးပြီး နိုင်ငံရေးနှင့် ပြည်သူ့ဥပဒေတွေကို လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ဖို့ လုပ်နေတာ”ဟု ဆိုခဲ့သည်။
ရွှေကမ္ဘာလုံးဆု ရွှေကမ္ဘာလုံးဆု (Golden Globe Award) သည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနှင့် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်မှ ရုပ်ရှင်နှင့် ရုပ်မြင်သံကြားလောကတွင် ထူးချွန်ပြောင်မြောက်သူများအား အသင်းသား ၉၃ ဦးပါဝင်သည့် ဟောလိဝုဒ် နိုင်ငံခြား သတင်းထောက်အသင်း (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) မှ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုသည့် ဆုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားကို ညစာစားပွဲအသွင်ဖြင့် နှစ်စဉ် ကျင်းပလေ့ရှိပြီး အမေရိကန် ရုပ်ရှင်လောကအကြား အော်စကာဆုပေးပွဲဖြင့် အဆုံးသတ်သည့် ရုပ်ရှင်ဆုပေးပွဲရာသီအတွင်း အရေးပါသော ဆုပေးပွဲတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
ဂျက်ဆီကာ ချက်စတိန်း "Take Shelter" နှင့် "The Tree of Life" တို့ပါဝင်သည်။ "The Help" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား၌ သူမသည် အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆုအတွက် လျာထားခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် စီအိုင်အေ အေးဂျင့်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် "Zero Dark Thirty" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအတွက် သူမသည် Golden Globe Award ကိုဆွတ်ခုရရှိခဲ့သည်။ သူမ၏ အမြင့်ဆုံးဇာတ်ကားနှစ်ခုဖြစ်သည့် သိပ္ပံစိတ်ကူးယာဉ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းများဖြစ်သော ကြယ်တာရာကြားဝယ် (၂၀၁၄) နှင့် အင်္ဂါဂြိုဟ်သား (၂၀၁၅) များတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ပူလစ်ဇာဆု အထူးသတင်းအတွက် ဆုကိုတော့ ဘောစ်စတွန်မာရသွန်ဗုံးဖေါက်ခွဲမှုနဲ့ ဗုံးဖေါက်ခွဲသူကို လိုက်ရှာတဲ့ အကြောင်း ရေးသားတဲ့ Boston Globe က ရခဲ့ပါတယ်။ ကင်ညာနိုင်ငံ Westgate mall မှာ အကြမ်းဖက် အတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ အထူးသတင်းမှတ်တမ်းနဲ့ ဓါတ်ပုံအတွက် ဆု ၂ ခု ဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့ သတင်းဌာနကတော့ The New York Times ပါ။
မော်ဂန် ဖရီးမန်း ဖရီးမန်းသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး ဇာတ်ပို့ဆုအား "Million Dollar Baby" (၂၀၀၄) ဇာတ်ကားဖြင့် အကယ်ဒမီဆု ရရှိခဲ့ပြီး "Street Smart" (၁၉၈၇)၊ "Driving Miss Daisy" (၁၉၈၉)၊ "The Shawshank Redemption" (၁၉၉၄) နှင့် "Invictus" (၂၀၀၉) ဇာတ်ကားများဖြင့် အော်စကာဆုအတွက် လျာထားခြင်းခံခဲ့ရသည်။ သူသည် Golden Globe Award နှင့် Screen Actors Guild Award ကိုလည်း လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ မော်ဂန် ဖရီးမန်းသည် ဇာတ်ကားတစ်ကားလျင် ၇၄.၄ မီလီယံ ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် တတိယမြောက် အအောင်မြင်ဆုံး ကြယ်ပွင့်အဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့သည်။
ဂျင်မီဝေးလ်စ် Wales has asserted that he is the sole founder of Wikipedia and has publicly disputed Larry Sanger's designation asaco-founder of Wikipedia, describing the claim as "preposterous" to "The Boston Globe" in 2006 and calling "the whole debate silly" in an April 2009 interview. Sanger was identified as co-founder at least as early as September 2001 by "The New York Times" and was referred to asafounder alongside Wales in Wikipedia's first press release in January 2002. In August of that year, Wales identified himself as "co-founder" of Wikipedia. In addition to developing Wikipedia in its early phase and guiding the project, Sanger was responsible for the idea of applying the wiki concept to the building ofafree encyclopedia, and for the name "Wikipedia". Ina2005 memoir for Slashdot, Sanger nevertheless ascribed the broader idea to Wales: "To be clear, the idea of an open source, collaborative encyclopedia, open to contribution by ordinary people, was entirely Jimmy's, not mine, and the funding was entirely by Bomis. … The actual development of this encyclopedia was the task he gave me to work on." In response to Wales' view, Sanger posted on his personal webpage many links which appear to confirm his role in founding Wikipedia, all of which described Wales and Sanger as the co-founders. Inadiscussion in March 2007 with Brian Bergstein of the Associated Press, Wales said: "When you write this up please do not uncritically repeat Sanger's absurd claim to be the co-founder of Wikipedia." He added: "I am not bent out of shape about it. The facts are on my side, which is why I bother so little about it." Wales' role in the Wikipedia community has been described as benevolent dictator, constitutional monarch and spiritual leader.